(Kugcine ukubuyekezwa On: 17/01/2020)
Ungakwazi ukufinyelela edolobheni ngesitimela kuphi e-Italy, noma okunye, efana Switzerland neFrance. Kukhona njalo, izitimela ngesivinini ukuthi ahambe izikhathi eziningana nsuku zonke kusuka Milan neRoma, kodwa futhi kusukela Venice. Lezi uhambo kuthathe amahora esingaphansi kwezinsuku ezimbili, futhi uthola ithuba ukubona amagquma amahle amasimu Italy.
Ngakho ingabe ukulungele ukujabulela iwayini amadolobha e-Europe? SaveATrain.com kuzokusiza uthole yisiphi idolobha Europe, okusheshayo, ezishibhile futhi emomotheka!
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu futhi umbhalo kanye nje ukusinika credit enesixhumanisi lokhu post blog, noma chofoza lapha: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/wine-cities-europe/ - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)
#bestwine europeantravel europetravel Tranride izitimela ithiphu yesitimela Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi amathiphu isitimela sokuvakasha travelaustria travelfrance travelgermany travelitaly iwayini